သငျသိရှိရနျလိုအပျသော သနျ့ရှငျးရေးပုံမှနျမလုပျရငျ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျလာစမေယျ့ အိမျသုံးပစ်စညျးမြား အိမျနှငျ့ဆိုငျသော ဝနျဆောငျမှုမြား Art of Living ဝနျဆောငျမှုမြား | ShweProperty.com သငျသိရှိရနျလိုအပျသော သနျ့ရှငျးရေးပုံမှနျမလုပျရငျ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျလာစမေယျ့ အိမျသုံးပစ်စညျးမြား အိမျနှငျ့ဆိုငျသော ဝနျဆောငျမှုမြား Art of Living ဝနျဆောငျမှုမြား | ShweProperty.com
သနျ့ရှငျးရေးပုံမှနျမလုပျရငျ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျလာစမေယျ့ အိမျသုံးပစ်စညျးမြား
Sint Sint, Shweproperty
အသနျ့အပွနျ့ကွိုကျသူတှအေတှကျတော့ အိမျသနျ့ရှငျးရေးလုပျတာကို အလုပျပိုတဈခုလို့တော့ မမွငျတကျကွပါဘူး။ ပုံမှနျလုပျနကြေ အလုပျတဈခုဖွဈလို့ သူတို့အတှကျ ဝနျထုပျဝနျပိုးလညျး မဖွဈစပေါဘူး။ အရမျးအလုပျမြားတဲ့သူတှကေတြော့ အိမျသနျ့ရှငျးရေးကို ထငျသလောကျမလုပျနိုငျကွပါဘူး။ ဖွဈသလိုနတောမြိုးတော့ မဟုတျပမေယျ့ အိမျကို ပဈထားသလိုမြိုးတော့ ဖွဈတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကလညျး အသနျ့မကွိုကျတာတော့ မဟုတျပါဘူး။
လူတှကေို ကနျြးမာရေးကို မသိမသာထိခိုကျစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲမှာ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှု၊ ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲ၊ အစားအသောကျနဲ့ ရောဂါပိုးမှားတှကွေောငျ့လညျး ပါပါတယျ။ အိမျထဲမှာလညျး မိမိတို့ အသုံးပွုနတေဲ့ ပစ်စညျးတှကေနေ ကိုယျတိုငျသတိမထားမိတဲ့ အရာတှကွေောငျ့လညျး ကနျြးမာရေးထိခိုကျတာဖွဈတကျတယျဆိုတာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ပုံမှနျသနျ့ရှငျးရေးမလုပျမိတဲ့အခါ သငျ့ကနျြးမာရေးထိခိုကျစတေဲ့ အိမျ သုံးပစ်စညျးတှကေတော့ ....
တနကေုနျပနျးနှမျးနယျမှုတှေ ပွပြေောကျအောငျညတိုငျးအိပျစကျကွပမေယျ့ အိပျရာခငျးတှကေိုတော့ ပုံမှနျလဲပေးဖို့ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ အိပျရာခငျးတှပေျေါမှာ ခန်ဓာကိုယျပျေါက ဆဲလျသအေရအေတှကျတဈပတျကို တအောငျစခှဲလောကျ ရှိနတေတျပါတယျ။ ဆဲလျအသတှေကေ မကျြစိနဲ့မမွငျနိုငျတဲ့ ပိုးမှားတှရေဲ့အစာဖွဈလာပွီး ပေါကျဖှားလာတာပါ။ ဒီပိုးမှားတှကွေောငျ့ အရပွေားဓာတျမတညျ့တာ၊ နီရဲယားယံတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
လစေုပျစကျဆိုတာ အိမျထဲကအမှိုကျတှကေို သနျ့စငျပေးတာဆိုပမေယျ့လညျး သူ့ကွောငျ့ နာမကနျြးဖွဈစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှရှေိပါတယျ။ ကနျြးမာရေးစာစောငျတှမှော ဖျောပွခကျြအရ လစေုပျစကျတှဟောလထေဲကို အမှုနျတှနေဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးမှားတှေ ပွနျထုတျလှတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဓာတျမတညျ့တာမြိုး၊ နှာစေး ခြောငျးဆိုးတာမြိုး ဖွဈစတောပါ။ လစေုပျစကျအသဈတှထေကျ အဟောငျးတှမှော လစေဈမကောငျးတော့တဲ့ အခါ လူကိုဒုက်ခပေးတဲ့ပိုးမှားတှေ ပိုးထှကျစသေလို အိမျအနီးအနားဝနျးကငျြမှာ စကျရုံ၊ အလုပျရုံတှရှေိတာကလညျး လထေုညဈညမျးတာမြိုးရှိရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ တရိစ်ဆာနျခဈြသူတှဟောသူတို့ရဲ့အကောငျလေးတှကေို အိမျပျေါမှာ သူတို့နဲ့တူတူလကျပှနျးတတီး ထားတတျကွပါတယျ။ တခြို့ဆို အိပျရာတူတူအိပျတာမြိုးတှတေောငျရှိပါတယျ။ သူတို့လေးတှကေို သနျ့ရှငျး အောငျထားပမေယျ့ အမှေးတှကွေောငျ့ ဓာတျမတညျ့သူတှမှော အသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အမရေိကနျအဆုတျအဖှဲ့အစညျးကွီးရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျတှရေဲ့ အမှေးတှကေို ပရိဘောဂ၊ အင်ျကြီတှနေဲ့ ကောဇောတှမှောပိုကပျငွိတတျကွတာမို့ သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့အခါ ဒီနရောတှကေို အဓိကထားလုပျကွဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
အိမျထဲက အလငျးရောငျအားနညျးပွီး ရငှေပွေ့နျတတျတဲ့နရောတှမှော မှိုတှပေေါကျဖှားတတျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ တံခါးဘောငျဘေးကွား၊ ရခြေိုခနျးနဲ့ စတိုခနျးတှဟော ပေါကျဖှားလှယျတဲ့နရောတှပေါ။ မမွငျရတဲ့မှိုအဆိပျ တှကွေောငျ့ မကွာခဏ နှာစေးတာ၊ ခေါငျးကိုကျခွငျးနဲ့ တခွား အသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါတှေ ဖွဈပှားစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မှိုပေါကျဖှားလှယျတဲ့ အတှငျးပိုငျးနရောတှကေို ဆပျပွာမှုနျ့နဲ့သခြောသနျ့စငျပေးဖို့လို ပါတယျ။
နောကျထပျကနျြးမာရေးထိခိုကျစတေဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျးက ခွသေုတျခုံပါ။ ခွသေုတျခုံတှကေို တံခါးပေါကျဝ၊ မီဖိုးခြောငျနဲ့ ရခြေိုးခနျးရှတှေ့မှော ထားတတျကွပမေယျ့ ပုံမှနျသနျ့စငျပေးဖို့ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ရခြေိုးခနျ့ရှခွေ့သေုတျခုံမှာ ရတှေေ၊ ဖုနျမှုနျ့တှကွေောငျ့ မှိုတှပေေါကျဖှားလာပွီး လူကိုဒုက်ခပေးနိုငျလို့ မကွာခဏရနှေေးပူနဲ့ တိုကျခြှတျဆေးကွောပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေးလုပျသလိုမြိုးပဲ အိမျထဲကပစ်စညျးတှကေိုလညျး သနျ့ရှငျးရေး လုပျရမှာပါ။ သနျ့ရှငျးရေးကို အသေးစိပျမလုပျနိုငျရငျတော့ ဖှုနျမှုနျ့လေးတှပွေောငျအောငျတော့ တိုကျပေးရပါမယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ တောကျပွောငျသနျ့ရှငျးနတောကတော့ စိတျလညျးခမျြးသာသလို ကိုယျလညျးကနျြးမာစပေါတယျ။ အဲတော့ သတိပွုရမယျ့အခကျြလေးတှမှေတျထားပါဦးနျော။ အဲဒါက ဘာတှလေဲဆိုတော့
တံခါးလကျကိုငျတှကေ နစေ့ဉျကိုငျတှယျအသုံးပွုရတဲ့ ပစ်စညျးတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ လကျကနတေဆငျ့ ရောဂါပိုးမှားတှဟော တံခါးလကျကိုငျတှမှော ကပျကနျြနခေဲ့ပွီး တခွားမိသားစုဝငျတှကေိုပါ ရောဂါပိုးတှကေူးစကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အပွငျသှားပွီးပွနျလာတဲ့အခါတိုငျးမှာ တံခါးလကျကိုငျတှကေို ပိုးသတျဆေးရညျဖွနျးပေးရပါမယျ။
အဲယားကှနျးမှထှကျလာတဲ့ လထေုကနေ တဈဆငျ့မမွငျနိုငျတဲ့ ဖုနျ အညဈအကွေား ရောဂါပိုးတှပေါလာပွီး အသကျရှုလမျးကွောငျးထဲကို ဝငျရောကျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စာဖတျသူတို့အိမျမှာအသုံးပွုနတေဲ့ အဲယားကှနျးတှကေို servicing သမားချေါပွီး ဆေးကွောသနျ့စငျတာမြိုးတှလေုပျပေးဖို့လိုပါတယျ။ servicing မလုပျဖွဈရငျတောငျ အနညျးဆုံး ၁လ တဈခါလောကျအဲယားကှနျး အတှငျးက air filer လေးတှေ ထုတျပွီးဆေးကွော သနျ့စငျပေးမယျဆိုရငျ ဖုနျမှုနျအညဈအကွေးနဲ့ ပိုးမှားကငျးစငျပွီး အအေးဓာတျလညျးပိုရစပေါတယျ။
အမြားစုကတော့ အိပျယာတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့မနေ့တေကျကွပါတယျ။ စာဖတျသူတို့ရော အိပျယာကိုပုံမှနျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျဖွဈကွလား။ တကယျတော့ အိပျယာတှမှော ဖုနျတှေ အညဈအကွေးတှနေဲ့ အနံ့အသကျဆိုးတှအေမြားကွီး ကပျညှိတှယျနနေိုငျတဲ့ နရောတဈခုဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျသနျ့ရှငျးမှုမရှိဘူးဆိုရငျ အရပွေားဆိုငျရာပွဿနာမြား မကျြနှာပျေါမှာဝကျခွံနှငျ့အမဲစကျမြားထှကျခွငျး ခန်ဓာကိုယျခြှေးနံ့ဆိုးတှေ ထှကျစခွေငျးစတဲ့အရာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အိပျယာခငျး ခေါငျးအုံးစှတျ ဖကျလုံးစှတျတှကေို ၁ ပတျတဈခါလောကျလြျောပွီး နရေောငျခွညျနဲ့ လကေောငျးလသေနျ့ရတဲ့နရောမြားထုတျလှနျးသငျ့ပါတယျ။
နစေ့ဉျအစားအသောကျခကျြပွုတျရာမှာ အသုံးပွုနရေတဲ့ မီးဖိုခြောငျတဈခုရဲ့ သနျ့ရှငျးရေးကလညျး မဖွဈမနထေညျ့စဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။ မီးဖိုခြောငျကို ပုံမှနျသနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျမှုမရှိရငျ ဘကျတီးရီးယားပိုးမှားတှပေေါကျဖှားရာ နရောကွီးတဈခုဖွဈလာပွီး နစေ့ဉျစားသောကျနတေဲ့ အစားအစာတှကေလညျးသနျ့ရှငျးမှုမရှိတော့ပဲ ရောဂါတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျမဖွဈမနသေနျ့ရှငျးရေးလုပျသငျ့တဲ့နရောထဲမှာ မီးဖိုခြောငျနဲ့ မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးတှကေလညျး မပါမဖွဈပါပဲ။
(၅) ရခြေိုးခနျးနှငျ့ အိမျသာ
ရခြေိုးခနျးနှငျ့ အိမျသာတှဟော စိုထိုငျးမှုအားကောငျးတာကွောငျ့ ဘကျတီးရီးယာပိုးမှားတှပေေါကျဖှားဖို့အကောငျးဆုံးနရောတဈခုဖွဈသလို ခွငျတှလေညျး ပေါကျဖှားနိုငျပါတယျ။ရခြေိုးခနျးနဲ့ အိမျသာတှမှော သနျ့ရှငျးမှုမရှိရငျ အနံ့အသကျဆိုးတှလေညျး ထှကျလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနညျးဆုံးတော့ ရခြေိုးခနျး အိမျသာတှကေို တဈပတျကို တဈကွိမျလောကျတော့ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။အရေးကွီးဆုံးကတော့ သငျအိပျစကျမယျ့ အိမျယာ သငျ့ရဲ့ နားခိုရာနရောလေးပေါ့။ သငျ့အိပျခနျး၊ အိပျရာနဲ့ပတျသကျပွီး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျလေးတှကေိုလညျးပွောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
(၁) အိပျခနျးဆိုတာ အိပျစကျအနားယူဖို့ပဲဖွဈသငျ့ပါတယျ။
အိပျခနျးထဲမှာ တခွားအလုပျနဲ့ ပတျသကျတာတှေ၊ မလိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှေ မထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။ အဝတျဗီရိုနဲ့ အဝတျစငျတှေ ထားတယျဆိုရငျတောငျ အိပျယာနား ကပျမထားပါနဲ့ နရောကဉျြးတယျဆိုရငျတောငျ အိပျယာပျေါမှာ အဝတျတှပေုံထားတာမြိုး မလုပျဖို့လိုအပျပါတယျ။
အိပျယာက ထလာတာနဲ့ စောငျနဲ့ တခွားအသုံးအဆောငျတှကေို ခေါကျသိမျးပါ။ အိပျယာပျေါမှာ သနျ့ရှငျးနအေောငျထားပါ။ ပွီးတော့ အိပျခနျးသနျ့ရှငျးရေးကို တဈပတျတဈခါတော့ လုပျပေးပါ။
(၃) အိပျယာပျေါမှာ ပစ်စညျးတှေ ရှုပျဖှမထားပါနဲ့!
အိပျခနျးထဲမှာ မှနျထားမယျဆိုရငျ မှနျထဲကို ကွညျ့လိုကျရငျ အိပျယာမပျေါတဲ့နရောမှာ ထားရမှာပါ။ မဟုတျရငျ သငျအိပျပြျောနခြေိနျမှနျထဲမှာ သငျ့ပုံရိပျ ပျေါနပွေီး အဲ့ဒီအခြိနျမကျတဲ့ အိပျမကျတှကေ တကယျဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ အိပျမကျဆိုးတှေ မကျခဲ့ရငျ ဒုက်ခပဲလေ။
အိပျတဲ့အခြိနျမှာ မီးလငျးနတောက မကောငျးသလို၊ အလငျးရောငျမရှိဘဲ လုံးဝမှောငျနတောကလညျး မကောငျးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အိပျတဲ့အခြိနျမှာ အလငျးရောငျရရုံ မီးမှိနျမှိနျလေးကို ထှနျးထားသငျ့ပါတယျနျော။
(၆) အိပျခနျးနဲ့ အိပျယာနဲ့ပတျသကျတဲ့ အသုံးအဆောငျတှရေဲ့အရောငျ”
အနီရောငျ၊ ခရမျးရောငျ စတဲ့အရောငျရငျ့ရငျ့တောကျတောကျတှကေ အိပျစကျခွငျးကို အနှောကျအယှကျဖွဈစတောကွောငျ့အိပျခနျးနဲ့ အိပျယာအသုံးအဆောငျတှမှော မသုံးသငျ့ပါဘူး။ အဝါရောငျနုနု၊ အပွာနု ၊ ထုံးခွောကျရောငျ စတာတှကေ နှေးထှေးမှုကိုဖွဈစပွေီး အိပျစကျခွငျးအတှကျအကူအညီဖွဈစလေို့ အဲ့ဒီအရောငျတှကေိုသုံးတာ သငျ့တျောပါတယျ။
အိပျယာကို တဈနှဈပတျလုံး တဈနရောထဲမှာထားတာမြိုးထကျ ခွောကျလလောကျမှာ တဈခါ အရှအေ့ပွောငျးလုပျပေးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ အဲ့ဒီလို အိပျယာကို နရောရှလေို့ကျတဲ့အခါ အိပျခနျးကိုပါ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီးသားဖွဈသှားပွီး နရောအသဈကို ရောကျလာသလို ခံစားရတာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ငွီးငှနေ့တေဲ့ ခံစားခကျြတှကေိုလညျး ပွောငျးလဲပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
အဓိကတော့ အိပျယာလေးပါပဲ။ တဈနကေုနျ နှမျးနယျလာတဲ့ စိတျကို ဒီတဈနရောတညျးမှာပဲ ဖွဖြေောကျရတာပါ။ သကျတောငျ့သကျတာရှိဖို့က အရေးကွီးဆုံးပါပဲ။ အိပျယာအသုံးအဆောငျတှဖွေဈတဲ့ ခေါငျးအုံးစှပျ၊ ဖကျလုံးစှပျ၊ စောငျနဲ့ အိပျယာခငျးတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီး လြှျောဖှတျဖို့မနေ့တေတျတာက ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ အနညျးဆုံးတော့ တဈပတျတဈခါလောကျလြှျောပေးသငျ့ပါတယျ။ ဖုနျတှကေိုတော့ တဈနတေ့ဈခါရှငျးပေးရမှာပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကထှကျလာတဲ့ အညဈအကွေးတှဖွေဈတဲ့ ခြှေး၊ အဆီ၊ မိတျကပျ နဲ့ တဈခါတဈရံ သှားရညျတှပေါ ပကြေံလူးနတေကျပါတယျ။ ဒီလိုအညဈအကွေးတှေ စိမျ့ဝငျနတေဲ့ အိပျယာကိုပုံမှနျသနျ့ရှငျး မလုပျပေးဖူးဆိုရငျ အသားအရေ ယားယံတာ၊ အသကျရှုလမျးကွောငျး ပွသနာနဲ့၊ မှိုစှဲတဲ့ ပွသနာတှကွေောငျ့ နထေိုငျမကောငျး ဖွဈတတျပါတယျ။ အဓိကပွောခငျြတာကတော့ အိပျယာနဲ့ပတျသကျရငျ မှိုရောဂါက အဆိုးဆုံးနဲ့ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးပါပဲ။ ကနျြးမာရေးထိခိုကျစရေုံမြှမက ရောဂါဖွဈနမှေနျး မသိဘဲ အသကျသဆေုံးတဲ့အထိ ဖွဈတကျလို့ပါ။ကိုယျ့ရဲ့အနီးအနား ပတျဝနျးကငျြမှာ အမှုနျအမှားပေါငျး မြားစှာရှိပွီးအဲဒါတှကွေောငျ့ နှာစေးတာ၊ မကျြလုံးယားယံတာ၊ နှာခတြောနဲ့ အခွားမအီမသာဖွဈတာတှကွေောငျ့ ဖွဈစပေါတယျ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အရပွေားယားယံတာတှဖွေဈတာကွောငျ့ပါပဲ။ အငျမတနျဆိုးတဲ့ အရာတဈခုလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ဖုနျတှကေို ရှငျးတော့မယျဆိုရငျ ဖုနျးစုပျစကျနဲ့ စုပျပါ၊ ဆံခညျြမြှငျတှအေားလုံး ၊ဖုနျတှေ သဲတှလေညျး သနျ့ရှငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
အသန့်အပြန့်ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကို အလုပ်ပိုတစ်ခုလို့တော့ မမြင်တက်ကြပါဘူး။ ပုံမှန်လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ သူတို့အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလည်း မဖြစ်စေပါဘူး။ အရမ်းအလုပ်များတဲ့သူတွေကျတော့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို ထင်သလောက်မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဖြစ်သလိုနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အိမ်ကို ပစ်ထားသလိုမျိုးတော့ ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကလည်း အသန့်မကြိုက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတွေကို ကျန်းမာရေးကို မသိမသာထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ၊ အစားအသောက်နဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာလည်း မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကနေ ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိတဲ့ အရာတွေကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာဖြစ်တက်တယ်ဆိုတာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မိတဲ့အခါ သင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ အိမ် သုံးပစ္စည်းတွေကတော့ ....
တနေကုန်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ပြေပျောက်အောင်ညတိုင်းအိပ်စက်ကြပေမယ့် အိပ်ရာခင်းတွေကိုတော့ ပုံမှန်လဲပေးဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ အိပ်ရာခင်းတွေပေါ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ဆဲလ်သေအရေအတွက်တစ်ပတ်ကို တအောင်စခွဲလောက် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဆဲလ်အသေတွေက မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ ပိုးမွှားတွေရဲ့အစာဖြစ်လာပြီး ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ ဒီပိုးမွှားတွေကြောင့် အရေပြားဓာတ်မတည့်တာ၊ နီရဲယားယံတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လေစုပ်စက်ဆိုတာ အိမ်ထဲကအမှိုက်တွေကို သန့်စင်ပေးတာဆိုပေမယ့်လည်း သူ့ကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစာစောင်တွေမှာ ဖော်ပြချက်အရ လေစုပ်စက်တွေဟာလေထဲကို အမှုန်တွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ ပြန်ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဓာတ်မတည့်တာမျိုး၊ နှာစေး ချောင်းဆိုးတာမျိုး ဖြစ်စေတာပါ။ လေစုပ်စက်အသစ်တွေထက် အဟောင်းတွေမှာ လေစစ်မကောင်းတော့တဲ့ အခါ လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပိုးမွှားတွေ ပိုးထွက်စေသလို အိမ်အနီးအနားဝန်းကျင်မှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေရှိတာကလည်း လေထုညစ်ညမ်းတာမျိုးရှိရင် ပိုဆိုးပါတယ်။
များသောအားဖြင့် တရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကောင်လေးတွေကို အိမ်ပေါ်မှာ သူတို့နဲ့တူတူလက်ပွန်းတတီး ထားတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ဆို အိပ်ရာတူတူအိပ်တာမျိုးတွေတောင်ရှိပါတယ်။ သူတို့လေးတွေကို သန့်ရှင်း အောင်ထားပေမယ့် အမွှေးတွေကြောင့် ဓာတ်မတည့်သူတွေမှာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်အဆုတ်အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အိမ်မွှေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အမွှေးတွေကို ပရိဘောဂ၊ အင်္ကျီတွေနဲ့ ကောဇောတွေမှာပိုကပ်ငြိတတ်ကြတာမို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ဒီနေရာတွေကို အဓိကထားလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ဆေးရည်တော်တော်များများမှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်လို့ သတိပြုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ တချို့အစွန်းချွတ်ဆေးတွေမှာဆိုရင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Carcinogens ပါဝင်လို့ ဒီလိုဓာတုပစ္စည်းတွေအစား သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ သံပုရာ၊ ဟင်းချက်ဆီ၊ ရှာလကာရည်နဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ တွေကို အစားထိုးသုံးစွဲကြည့်သင့်ပါတယ်။
အိမ်ထဲက အလင်းရောင်အားနည်းပြီး ရေငွေ့ပြန်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာ မှိုတွေပေါက်ဖွားတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တံခါးဘောင်ဘေးကြား၊ ရေချိုခန်းနဲ့ စတိုခန်းတွေဟာ ပေါက်ဖွားလွယ်တဲ့နေရာတွေပါ။ မမြင်ရတဲ့မှိုအဆိပ် တွေကြောင့် မကြာခဏ နှာစေးတာ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ တခြား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှိုပေါက်ဖွားလွယ်တဲ့ အတွင်းပိုင်းနေရာတွေကို ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့သေချာသန့်စင်ပေးဖို့လို ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းက ခြေသုတ်ခုံပါ။ ခြေသုတ်ခုံတွေကို တံခါးပေါက်ဝ၊ မီဖိုးချောင်နဲ့ ရေချိုးခန်းရှေ့တွေမှာ ထားတတ်ကြပေမယ့် ပုံမှန်သန့်စင်ပေးဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေချိုးခန့်ရှေ့ခြေသုတ်ခုံမှာ ရေတွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် မှိုတွေပေါက်ဖွားလာပြီး လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်လို့ မကြာခဏရေနွေးပူနဲ့ တိုက်ချွတ်ဆေးကြောပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလုပ်သလိုမျိုးပဲ အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမှာပါ။ သန့်ရှင်းရေးကို အသေးစိပ်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ ဖှုန်မှုန့်လေးတွေပြောင်အောင်တော့ တိုက်ပေးရပါမယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ တောက်ပြောင်သန့်ရှင်းနေတာကတော့ စိတ်လည်းချမ်းသာသလို ကိုယ်လည်းကျန်းမာစေပါတယ်။ အဲတော့ သတိပြုရမယ့်အချက်လေးတွေမှတ်ထားပါဦးနော်။ အဲဒါက ဘာတွေလဲဆိုတော့
တံခါးလက်ကိုင်တွေက နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကနေတဆင့် ရောဂါပိုးမွှားတွေဟာ တံခါးလက်ကိုင်တွေမှာ ကပ်ကျန်နေခဲ့ပြီး တခြားမိသားစုဝင်တွေကိုပါ ရောဂါပိုးတွေကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အပြင်သွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ တံခါးလက်ကိုင်တွေကို ပိုးသတ်ဆေးရည်ဖြန်းပေးရပါမယ်။
အဲယားကွန်းမှထွက်လာတဲ့ လေထုကနေ တစ်ဆင့်မမြင်နိုင်တဲ့ ဖုန် အညစ်အကြေား ရောဂါပိုးတွေပါလာပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတို့အိမ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ အဲယားကွန်းတွေကို servicing သမားခေါ်ပြီး ဆေးကြောသန့်စင်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ servicing မလုပ်ဖြစ်ရင်တောင် အနည်းဆုံး ၁လ တစ်ခါလောက်အဲယားကွန်း အတွင်းက air filer လေးတွေ ထုတ်ပြီးဆေးကြော သန့်စင်ပေးမယ်ဆိုရင် ဖုန်မှုန်အညစ်အကြေးနဲ့ ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး အအေးဓာတ်လည်းပိုရစေပါတယ်။
အများစုကတော့ အိပ်ယာတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မေ့နေတက်ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ရော အိပ်ယာကိုပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖြစ်ကြလား။ တကယ်တော့ အိပ်ယာတွေမှာ ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ အနံ့အသက်ဆိုးတွေအများကြီး ကပ်ညှိတွယ်နေနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သန့်ရှင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင် အရေပြားဆိုင်ရာပြဿနာများ မျက်နှာပေါ်မှာဝက်ခြံနှင့်အမဲစက်များထွက်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ်ချွေးနံ့ဆိုးတွေ ထွက်စေခြင်းစတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အိပ်ယာခင်း ခေါင်းအုံးစွတ် ဖက်လုံးစွတ်တွေကို ၁ ပတ်တစ်ခါလောက်လျော်ပြီး နေရောင်ခြည်နဲ့ လေကောင်းလေသန့်ရတဲ့နေရာများထုတ်လှန်းသင့်ပါတယ်။
နေ့စဉ်အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရာမှာ အသုံးပြုနေရတဲ့ မီးဖိုချောင်တစ်ခုရဲ့ သန့်ရှင်းရေးကလည်း မဖြစ်မနေထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်မှုမရှိရင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားရာ နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီး နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေကလည်းသန့်ရှင်းမှုမရှိတော့ပဲ ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်မဖြစ်မနေသန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်တဲ့နေရာထဲမှာ မီးဖိုချောင်နဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကလည်း မပါမဖြစ်ပါပဲ။
(၅) ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာ
ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာတွေဟာ စိုထိုင်းမှုအားကောင်းတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယာပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သလို ခြင်တွေလည်း ပေါက်ဖွားနိုင်ပါတယ်။ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာတွေမှာ သန့်ရှင်းမှုမရှိရင် အနံ့အသက်ဆိုးတွေလည်း ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနည်းဆုံးတော့ ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွေကို တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်တော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင်အိပ်စက်မယ့် အိမ်ယာ သင့်ရဲ့ နားခိုရာနေရာလေးပေါ့။ သင့်အိပ်ခန်း၊ အိပ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်လေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
(၁) အိပ်ခန်းဆိုတာ အိပ်စက်အနားယူဖို့ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အိပ်ခန်းထဲမှာ တခြားအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အဝတ်ဗီရိုနဲ့ အဝတ်စင်တွေ ထားတယ်ဆိုရင်တောင် အိပ်ယာနား ကပ်မထားပါနဲ့ နေရာကျဉ်းတယ်ဆိုရင်တောင် အိပ်ယာပေါ်မှာ အဝတ်တွေပုံထားတာမျိုး မလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အိပ်ယာက ထလာတာနဲ့ စောင်နဲ့ တခြားအသုံးအဆောင်တွေကို ခေါက်သိမ်းပါ။ အိပ်ယာပေါ်မှာ သန့်ရှင်းနေအောင်ထားပါ။ ပြီးတော့ အိပ်ခန်းသန့်ရှင်းရေးကို တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ လုပ်ပေးပါ။
(၃) အိပ်ယာပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေ ရှုပ်ဖွမထားပါနဲ့!
တတ်နိုင်ရင် အိပ်ယာပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေ အစုံရောက်နေတာ မကောင်းပါဘူး။ နေရာကျဉ်းရင်ပိုတောင်မထားသင့်ပါဘူး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ ကျောင်းစာအုပ်တွေ၊ လွယ်အိတ် စတာတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ ပြန်ထားဖြစ်အောင်ထားပါ။
အိပ်ခန်းထဲမှာ မှန်ထားမယ်ဆိုရင် မှန်ထဲကို ကြည့်လိုက်ရင် အိပ်ယာမပေါ်တဲ့နေရာမှာ ထားရမှာပါ။ မဟုတ်ရင် သင်အိပ်ပျော်နေချိန်မှန်ထဲမှာ သင့်ပုံရိပ် ပေါ်နေပြီး အဲ့ဒီအချိန်မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေက တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ခဲ့ရင် ဒုက္ခပဲလေ။
အိပ်တဲ့အချိန်မှာ မီးလင်းနေတာက မကောင်းသလို၊ အလင်းရောင်မရှိဘဲ လုံးဝမှောင်နေတာကလည်း မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိပ်တဲ့အချိန်မှာ အလင်းရောင်ရရုံ မီးမှိန်မှိန်လေးကို ထွန်းထားသင့်ပါတယ်နော်။
(၆) အိပ်ခန်းနဲ့ အိပ်ယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေရဲ့အရောင်”
အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင် စတဲ့အရောင်ရင့်ရင့်တောက်တောက်တွေက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့်အိပ်ခန်းနဲ့ အိပ်ယာအသုံးအဆောင်တွေမှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။ အဝါရောင်နုနု၊ အပြာနု ၊ ထုံးခြောက်ရောင် စတာတွေက နွေးထွေးမှုကိုဖြစ်စေပြီး အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကူအညီဖြစ်စေလို့ အဲ့ဒီအရောင်တွေကိုသုံးတာ သင့်တော်ပါတယ်။
အိပ်ယာကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး တစ်နေရာထဲမှာထားတာမျိုးထက် ခြောက်လလောက်မှာ တစ်ခါ အရွှေ့အပြောင်းလုပ်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အိပ်ယာကို နေရာရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ အိပ်ခန်းကိုပါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီး နေရာအသစ်ကို ရောက်လာသလို ခံစားရတာကြောင့် သင့်ရဲ့ငြီးငွေ့နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
အဓိကတော့ အိပ်ယာလေးပါပဲ။ တစ်နေကုန် နွမ်းနယ်လာတဲ့ စိတ်ကို ဒီတစ်နေရာတည်းမှာပဲ ဖြေဖျောက်ရတာပါ။ သက်တောင့်သက်တာရှိဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ အိပ်ယာအသုံးအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်၊ ဖက်လုံးစွပ်၊ စောင်နဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး လျှော်ဖွတ်ဖို့မေ့နေတတ်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်လျှော်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်တွေကိုတော့ တစ်နေ့တစ်ခါရှင်းပေးရမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ အညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့ ချွေး၊ အဆီ၊ မိတ်ကပ် နဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ သွားရည်တွေပါ ပေကျံလူးနေတက်ပါတယ်။ ဒီလိုအညစ်အကြေးတွေ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ အိပ်ယာကိုပုံမှန်သန့်ရှင်း မလုပ်ပေးဖူးဆိုရင် အသားအရေ ယားယံတာ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပြသနာနဲ့၊ မှိုစွဲတဲ့ ပြသနာတွေကြောင့် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ အိပ်ယာနဲ့ပတ်သက်ရင် မှိုရောဂါက အဆိုးဆုံးနဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေရုံမျှမက ရောဂါဖြစ်နေမှန်း မသိဘဲ အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်တက်လို့ပါ။ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမှုန်အမွှားပေါင်း များစွာရှိပြီးအဲဒါတွေကြောင့် နှာစေးတာ၊ မျက်လုံးယားယံတာ၊ နှာချေတာနဲ့ အခြားမအီမသာဖြစ်တာတွေကြောင့် ဖြစ်စေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အရေပြားယားယံတာတွေဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။ အင်မတန်ဆိုးတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဖုန်တွေကို ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းစုပ်စက်နဲ့ စုပ်ပါ၊ ဆံချည်မျှင်တွေအားလုံး ၊ဖုန်တွေ သဲတွေလည်း သန့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
Written By : Khine Zar (ShweProperty.com)
Photo Credit : ecolive
ကနျြးမာရေးကို ထငျမထားလောကျအောငျထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ အိမျတိုငျးမှာရှိတတျတဲ့အရာမြား
အိမျမှာသောငျးကနျြးနတေဲ့ ကွမျးပိုးတှကေို ဘယျလိုနှငျမလဲ
အဲကှနျးခနျးမှာ အနမြေားသူတှေ သတိထား လိုကျနာသငျ့တဲ့ အခကျြမြား
Get daily fresh news delivered to your inbox
Freelance လုပျကိုငျသူတှေ အိမျတှငျးရုံးခနျးတဈခု…
အိမျမှာ ထိထိရောကျရောကျ ဘယျလိုအလုပျလုပျကွမလဲ
သငျ့အိမျမှာ ခွငျဆေးခှနှေငျ့ပရုတျလုံးတှေံ အသုံးပွုနပေါက ဒီစာစုလေးကို မဖွဈမနေ သိထားသငျ့ပါတယျ။ကမ်ဘာ့လူသုံးကုနျပစ်စညျးမြားအဖှဲ့ရဲ့…
အဲကှနျးခနျးမှာ အနမြေားသူတှေ သတိထား လိုကျနာသငျ့တဲ့…
ညဈပနေတေဲ့ ခေါငျးအုံးတှကေို သတိထားပါ
သနျ့ရှငျးရေးပုံမှနျမလုပျရငျ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို…
ဘဝကို ဟနျခကျြညီညီနထေိုငျဖို့ ပိုကျဆံစုနညျး (၆) နညျး
Living Style & Home Services